ABACHITHI BEZITALATO ZECORONATION KWIVEKI EZAYO | UTYRONE UHLASELA INDODA ENTSHA KAFIZ- IRADIO TIMES - ISITALATO ICORONATION
Abonakalisa i-Coronation Street kwiveki ezayo: UTyrone uhlasela indoda entsha kaFiz noEmma bafunda imfihlo ebuhlungu
Eyona Isitalato Icoronation
UNick uyavuya kakhulu xa evunyelwe ukuba uSam ahlale iveki yonke, kwaye ekugqibeleni uziva ukuba ubuyile unyana wakhe emva kokuba umama wakhe egrogrise ngokunqamla ukufikelela elandela elo shishini libi noSharon Bentley kunye neqela leziyobisi. Ngelixa ulungelelwaniso lokulilela uLeanne Battersby (uJane Danson) ukuvumela uSam ukuba athathe igumbi likaOliver, abathathu bafumane indlela yabo kwaye ubomi bubukeka buhle. Kude kuduke uSam.
Phumla, uSharon akabuyanga netaser yakhe ethembekileyo, inkwenkwe ikwi-balcony ethe tyaba inxibe ii-headphone zayo ngaphandle kwenkathalo emhlabeni, kwaye ayinakuva utata wakhe embiza. Njengokugqogqa kwesitrato okulandelayo, uNick noLee boyika okona kubi. Bobabini banovalo ngenxa yamava abuhlungu omzali kwiinyanga ezidlulileyo, ikamva labo liphethe ntoni kolu sapho ludidekileyo?
UTodd ufumana uBilly isaka
UTodd sele egcwele ukuzisola malunga nokubamba impompo yobushushu bendlu esembindini uBilly Mayhew (uDaniel Brocklebank) evulayo, ukuze nje afumane isityhwentywe sentiyo (uBen Hackett) ukugcina imfihlo yakhe yehlazo wayila uPaul Foreman (Peter Ash) ukubetha. Kodwa uyazisola ngokwenene xa ukuphanga kukhokelela kwisithandwa sakhe ukuba sixelelwe ngubhishophu ongathandekiyo ukuba arhoxe njengodikoni omkhulu.
UPaul ukwatyholwa ngobusela, uTodd engangxami ukulungisa nabani na, kwaye uzisa ingqumbo yeHlobo Spellman (Harriet Bibby) ogxeka utata wakhe owayekhulisa umntwana ngokumhlawulisa umsebenzi. Ngaba uTodd angayibeka le nto? Okanye uza kuvumela wonke umntu ukuba acinge ukuba uPaul ungumntu ombi? Ucinga ntoni?!
Kwenye indawo kwisitrato iCoronation
Iifoto ziqala kwikhalenda yesosi apho amadoda emozulu e-Weatherfield enza 'iMonty epheleleyo', ephakamisa amashiya kunye nemali yesisa sikaOliver. UAbi Franklin (Sally Carman) ufika egaraji eza kufumana u-Kev enxibe i-nowt kodwa i-cowboy hat kunye ne-gormless expression, ngelixa u-Debbie Webster (Sue Devaney) efumana ngaphezulu kunoko wayekubonisile xa engena kwivenkile esekoneni kwaye efumana umnini u-Dev Alahan (Jimmi Harkishin) ekubonakaliseni imveliso yakhe ngendlela enoveli kakhulu. Khusela amehlo akho, ababukeli…
UKelly Neelan (uMillie Gibson) usadlongozela entolongweni etyholwa ngohlaselo olwabulala uSeb, ke u-Laura Neelan (Kel Allen) ohlola iintlola ithuba lokuvelisa intombazana yakhe-kwaye benze inyani ngokukhawuleza kwinkqubo. Ukugcoba ulutsha olonzakeleyo ngeenkcukacha ngobo busuku benkwankca, uLaura wasela wakhupha amagqabantshintshi kwincwadi kaFiz kwaye wanika ibali lonke kwiGazethi malunga nentlekele yokutshintshisa imali ebandayo. Kukho into esixelela ukuba ayizukunceda ukuzikhusela kukaKelly…
Ndwendwela abazinikeleyo Ukuxhonywa Isitalato iphepha Zonke iindaba zamva nje, udliwanondlebe kunye nabaphangi. Ukuba ujonge ngaphezulu ukubukela jonga zethu Isikhokelo seTV .
ngubani umntu odumileyo on
INintendo tshintsha ikhadi le-sd elincinci
entsha kwidisney kunye ne-uk
Ndingumlinganiswa onjani weemfazwe
inkwenkwezi kwidisney kunye ne-uk
luqala nini ixesha umdyarho we-f1 namhlanje
leliphi ijelo elitsala kulo ngokuhlwanje